Dawladdu inay siiso $ 300K deeqo deg-deg ah beeralayda qolofta Washington - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Gobolka si loo siiyo $ 300K deeqo deg deg ah beeralayda Washington
Gobolka si loo siiyo $ 300K deeqo deg deg ah beeralayda Washington
Waaxyada Ganacsiga iyo Beeraha waxay iskaashi la leeyihiin shirkadda Impact Washington si loo abuuro Shellfish Seed Bank, iyadoo la siinayo ilaa $ 5,000 beeralayda kalluunka qolofta leh ee sida xun u saameysay COVID-19
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday $ 300,000 inay hadda diyaar u tahay deeqo la siiyo beeralayda kalluunka qolofta leh ee ay saamaynta ku yeelatay hoos u dhaca dhoofinta iyo iibka maqaayadaha COVID-19 awgeed. Baahida suuqa maxaliga ah iyo tan caalamiga ah ee Washington ee kalluunka qolofta adduunka ayaa si aad ah hoos ugu dhacay tan iyo bishii Janaayo, iyada oo beeralayda qaar ay soo sheegaan hoos u dhaca dakhliga ee 80-90% sanadkii hore. Washington waa hormoodka soosaarayaasha Mareykanka ee lohod iyo clams.
Ganacsigu wuxuu iskaashi la leeyahay Waaxda Beeraha ee Gobolka Washington (WSDA) si loogu maalgeliyo deeqaha $ 250,000 oo laga helo barnaamijka Deeqda Degdegga ah ee Ganacsiga Yaryar ee Washington iyo $ 50,000 oo laga helo Barnaamijka WBDA ee Rehab Reeraha.
Beeraleyda kalluunka qolofta leh ee Washington ayaa xilligan lagu jiro waxaa halakeeyay aafada adduunka. Waxaan bixinaynaa lacag hada loobaahanyahay si beeraleyda yar yar ee kalluunka qolofta gaar ah, ay si wanaagsan ugu iibsadaan xilligan xagaaga abuurka iyo dirxiga si ay u noolaadaan fursadaha iibka ee xilli ciyaareedka soosocda, ”ayuu yiri Gov. Jay Inslee. "Waxaan ku rajo weynahay in kaalmooyin dheeri ah oo federaal ah oo ku saabsan kalluumeysiga iyo dhaqashada dhirta la soo bandhigi doono laakiin waxaan u tallaabsaneynaa gobol ahaan sidii aan u caawin lahayn beeraleydan."
"Deeqahani waa hal dariiqo oo aan ku caawin karno warshadeena gobolka $ 300-milyan iyo ugu yaraan 3,000 oo shaqo oo ay taageerto, qaar badan oo ka mid ah bulshada ku nool miyiga oo durba la halgamaya dhaqaale," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown.
Qaar ka mid ah beeraleyda kalluumeysiga ayaa si guul leh u codsaday ilaha federaalka, sida amaahda Maamulka Ganacsiga Yaryar, laakiin qaar badan oo ka mid ahi ma awoodaan inay qaataan amaah dheeri ah ama xitaa u qalmaan ilahaan federaalka, ayuu yiri Brown.
"Warshadaha dhul-beereedka gobolkayagu waxay la tacaalayaan caqabado taxane ah oo aan horay loo arag oo ka dhashay masiibadan sii socota ee ku habsatay gobolkeena iyo adduunka intiisa badan," ayuu yiri agaasimaha WSDA Derek Sandison. Waxaan rajaynayaa inay tahay in deeqahan, oo imanaya waqtigan xasaasiga ah, ay ka caawin doonaan wershadaha inay la jaan qaadaan duufaantan adag. ”
Walaacyada warshadaha kalluunka qolofta leh ee Washington waxay gaareysaa ugu yaraan sagaal xero-xeebeedka West Coast laga soo bilaabo California ilaa British Columbia oo keena beeraleyda kalluunka qolofta leh ee Washington iyo wixii ka dambeeya. Waxyaabaha loo yaqaan 'hatcheries' ayaa la kulmay hoos u dhac weyn oo xagga iibka ah oo ku yimid beeralayda. Labada beeraleyda ah iyo milkiileyaasha ugaadhsiga, qiimaha abuurka iyo dirxiga waxay u taagan yihiin qaybo muhiim ah oo ka mid ah moodelladooda qiimaha. Dhimista dakhliga ee ay sababtay coronavirus ayaa dadka beeralayda ah waxay ka walaacsan yihiin inaysan haysan lacag ku filan oo ay ku iibsadaan abuur si ay ugu beeraan dalagyada sanadka soo socda ama ay u dheelitiraan qiimaha abuurka.
Ganacsiga iyo WSDA waxay la shaqeyn doonaan Impact Washington si ay u maamusho maalgelinta iyada oo loo marayo Bangiga Warshadaha Washington Shellfish. Beeraleyda aqoonta u leh ayaa dalban kara ilaa $ 5,000, oo uguyaraan $ 1,000 la heli karo si dib loogu soo celiyo dirxiga iyo iibsiga abuurka. Iibsasho u qalma oo la sameeyay intii u dhaxeysay Febraayo 29, 2020 iyo Juun 30, 2021 waxay xaq u leeyihiin lacag celin.
$ 300 oo dheeraad ah oo ah "Iibso Washington" oo ah gunno dhiirrigelin ah ayaa la bixin doonaa si loogu dhiirrigeliyo wax-ka-iibsiga hatcheries-ka ku saleysan Washington, halkii laga heli lahaa ilaha gobolka ka baxsan.
"Ujeeddada ugu weyn ee Shellfish Industry Seed Bank waa in loo abuuro sinaan beeralayda Washington, in la hubiyo in caawimaad loo heli karo inta badan beeraleydeena, iyo in laga caawiyo ganacsiyada Washington deggan in ay sii haystaan ​​shaqooyinka iyaga oo si deg deg ah uga baxa gargaarka," ayuu yiri Deloit R. Wolfe, Jr ., madaxweynaha iyo agaasimaha xarunta Impact Washington. "Barnaamijkani wuxuu yareynayaa saameynta dhaqaale ee sannadaha badan ay ku yeelan karto ganacsiyada kalluunka qolofta leh ee horseedi kara burburka mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee warshadaha gobolka."
Waxbadan ka baro Ganacsiga website. Soo hel codsiyada deeqaha halkan.
Chris McGann, Isgaarsiinta WSDA, (360) 628-3477
← Gobolku wuxuu doonayaa inuu wax ka qabto sinaan la'aanta dhaqaale iyadoo kordhinaysa caawimaadda dhaqan ahaan iyo luqad ahaan khuseeya milkiilayaasha ganacsiyada yaryar Gobolka Washington wuxuu helaa $ 1.35 milyan oo SBA deeq ah si kor loogu qaado dhoofinta ganacsiyada yaryar →